Iindaba -Ukamva lweZixhobo zoNyango
Ngendlela ekhawulezayo yangoku yezixhobo zonyango, ishishini lezixhobo zonyango kufuneka liyile ngokweembono zokuzikhethela, ubukrelekrele kunye nokuhamba. Kwelinye icala, ezi mbono zinokukhuthaza iimfuno zophuhliso lwentlalo. Kwelinye icala, la manqaku mathathu aya kuba sisitshixo kuphuhliso lwexesha elizayo. Ke loluphi ulwalathiso lophuhliso lwexesha elizayo kwizixhobo zonyango loyilo lweshishini? Kwixa elizayo, uyilo lweshishini lezixhobo zonyango luya kwenziwa lube lolwakho kunye neselfowuni. Ukuphuhliswa koyilo lweshishini lwezixhobo zonyango ezikrelekrele kukhuthaze isantya samayeza olwazi. Nge-Intanethi, unxibelelwano phakathi kwabaguli, abasebenzi bezonyango, izixhobo zonyango, amaziko ezonyango, kunye nokwakhiwa kwenkqubo yokhathalelo lwempilo yomguli.
Injongo kukubonelela ngeenkonzo zonyango ngokusebenzisa iindlela ezikrelekrele kunye nezothungelwano ezijikeleze abaguli, ukuze kufikelelwe kuphuhliso oluhambelanayo kwimiba emithathu yeendleko zenkonzo, umgangatho wenkonzo kunye namandla enkonzo.
Njengoyilo, kuya kufuneka enze eyakhe ingqalelo kunye nokuphendula kwimicimbi yezentlalo kunye neemfuno zemveliso. Cinga ngendlela ekufuneka yenziwe ngayo uyilo lwezixhobo zonyango ezifanelekileyo kwiminyaka yolwazi; Cinga ngendlela yokwenza ukuba abaguli bazive ngathi ngabantu kunye nokwahluka kweemveliso eziziswa yinkqubela phambili yetekhnoloji; vumela abaguli ukuba basebenzise izixhobo zonyango ukuzihlola kunye nokubuyela ekhaya, bonwabele uncedo olungaphaya koncedo lwesibhedlele, kwaye ngoncedo lwesibhedlele esweni umgama omde, ungagqiba uvavanyo lwaphambi kokunyanga, ukuthintela, ukujonga kunye nengxelo yasemva kokugula, ukubuyela kwimeko yesiqhelo , kunye namanyathelo okhathalelo lwempilo.
Ke ngoko, uyilo oluhlanganisiweyo lobukrelekrele, olwenziwe ngokobuqu, kunye nolwee-engile ezininzi kuyilo lweshishini lwezixhobo zonyango ezi-smart luya kuba yindawo entsha yokubhenela ukwanelisa uninzi lweentsapho. Ikwathetha ukuba uyilo olusebenzayo lokusetyenziswa koyilo lweshishini kunye neendlela zokwenza izixhobo zobuqhetseba zonyango ziya kuphakanyiswa. Iimfuno zoyilo oluphezulu.
Unyango olusebenzayo kukusetyenziswa kwe-Intanethi yezinto zezinto kwicandelo lezonyango, kunye nokwabelana ngezixhobo zonyango kugqityiwe kusetyenziswa idijithali kunye nokubonwa. Iqhutywa luhlaziyo olutsha lwezonyango, ilizwe lam lihlawula ngakumbi nangakumbi kutyalo-mali kwicandelo lonyango loluntu kunye nolondolozo lwempilo kuyilo lweshishini lwezixhobo zonyango kunye nolwazi lwezonyango.
Kwixesha elizayo, uyilo lweshishini lwezixhobo zonyango oluqinisekileyo luya kubonisa imeko eyomeleleyo yokwenziwa komntu kunye nokuhamba.